တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် ကေအင်န်ယူ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းရန် တိုင်းအစိုးရ အကြောင်းကြားထား ~ မြိတ်ပုလဲမြေ
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် ကေအင်န်ယူ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းရန် တိုင်းအစိုးရ အကြောင်းကြားထား
11:24 AM သတင်း No comments
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေသော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) လက်အောက်ခံ တပ်မဟာ ၄ (မြိတ်/ ထားဝယ်ခရိုင်) နယ်မြေ အတွင်းရှိ ကရင် အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက အကြောင်းကြား ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရက တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားများအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည့်အပြင် နိုင်ငံတော် အစိုးရက ဖွဲ့စည်းထားသည့် ၀န်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများ နည်းတူ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိ သဖြင့် ယခုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော ကရင်အမျိုးသား ရဲတပ်ဖွဲ့အား ဖျက်သိမ်းပေးရန်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အကောက်ခွန်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရေး လိုအပ်သလို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ဆောင်ရွက်ပေး ပါရန် အကြောင်းကြား ပါသည် ဟုလည်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
‘‘ဒီကိစ္စက တပ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရနဲ့ဖြစ်တာ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေက မကြာခဏ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဟိုဘက် ဒီဘက် ညှိလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားကြတယ်’’ ဟု မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဗဟိုဌာန (MPC) မှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ သို့သော် အဆိုပါ ကိစ္စမှာ ယခုအချိန်ထိ အဆင်မပြေသေးကြောင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး အဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦး ကပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးအနေဖြင့် ၁၉၉၂ မတ်လမှစ၍ KNU ရဲတပ်ဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း KNU တပ်မဟာ (၄) လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနှင့် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KNU ဘက်မှ နှစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။\_
မြိတ်မြို့တွင် ဆရာမ ဟန်ဆောင်ပြီး ပြည်တန်ဆာ လုပ်စားသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကြောင့် ဆရာမများ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်နေရ
မြိတ်မြို့ .................... ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော မယွန်းယမင်း ဆိုသူသည် ရပ်ကွက်ထဲ၊ ၄င်း ကျင်လည်ရာ လုပ်ငန်းထဲတွင် မြိတ်မြို့ အထက (၁)မှ အ...
မြိတ်မြို့၌ စိတ်မနှံ့သူ တစ်ဦးမှ လမ်းသွား လမ်းလာများအား ပုဆိန်ဖြင့် ခုတ်၍ အမျိုးသမီး (၁)ဦးနှင့် ကျောင်းသား(၁)ဦး သေဆုံး၊ ကျောင်းသားတစ်ဦး အတွင်း လူနာ အဖြစ် ကုသနေရ
၂၀၁ ၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၃) ရက်နေ့ နေ့လည် (၃)နာရီ ခွဲ အချိန်ခန့်တွင် မြိတ်မြို့ မြိတ်တောင် ရပ်ကွက် စက်ဝင်းရပ် ဒိုင်လမ်း နှင့် သဇင်ခ...
ရဲစခန်းမှူးနှင့် ရဲသတင်းပေးများ လုပ်ရပ်ကြောင့် မြိတ်မြို့ ပြည်သူများ လုံခြုံမှု မရှိ
ရဲစခန်းမှူးနှင့် ရဲသတင်းပေးများ လုပ်ရပ်ကြောင့် မြိတ်မြို့ ပြည်သူများ လုံခြုံမှု မရှိ News-Of-Myeik Facebook မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ htt...
မြိတ်မြို့၌ (၁၃)နှစ် သမီးအား ဖခင်ဖြစ်သူ (၄၂)နှစ်မှ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၆)ရက်နေ့၊ ည (၉း၄၀) အချိန်ခန့်တွင် မြိတ်မြို့၊ ကလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကလွင်ရွာမရပ် (ကလွင်စုံခေါင်း)၌ ဦးကျော်ဦး (၄၂)နှစ်မ...
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ပုလောမြို့နယ်၊ တိုကျေးရွာနေ ဦးမောင်ညို(ခ) ဦးနေ၀င်း၊ ဒေါ်အုန်းကြူတို့၏ သား မောင်အောင်ဖြိုးသူ(ခ) သံဝမ်းနှ...
မြိတ်ဒေသမှ blog များ
မိဘမေတ္တာ သားလိမ္မာ - လောကကောင်းကျိုး အများကောင်းကျိုးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူများ၊ အများအတွက် စံတင်လောက်သည့် အသက်ပေးဆပ်ခဲ့သူများစတဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိတ...
BEST Computer Centre (Myeik)
Over 60+ Android Games Infected With Malware - [image: 201310DIY-Android-Malware-Analysis-Taking-apart-OBAD] Security researchers discovered over 60 Android games on Google’s official Play Store are in...
(၁၅)ကြိမ်မြောက် အ.ထ.က(၂)မြိတ်မြို့ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲဖိတ်ကြားလွှာ - (၁၅)ကြိမ်မြောက် အ.ထ.က(၂)မြိတ်မြို့ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲဖိတ်ကြားလွှာ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မြိတ်မြို့ အ.ထ.က(၂) ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများ၏ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း...
မျက်စိမှိတ်ပြသောကောင်မလေး..... - မျက်စိမှိတ်ပြသောကောင်မလေး..... အရင်ဆုံးတော့ photoshop မှမိမိလိုချင်တဲ့ ပုံကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် ပြီးတော့ Ctrl + J ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer ကို Duplicate လုပ်ပါမ...
“ငါကိုယ်တိုင်...ငါ့ကိုယ်ငါ.....ဖြေသိမ့်ခြင်း” - အချစ်ဆိုတဲ့.....၀န်ထုပ်ဝန်ုပိုးကြီး ငါ့ ရင်ဘတ်ပေါ်က လျှောကျသွားချိန် ငါ..ပေါ့ပါးသွားမယ်ထင်ခဲ့တာ..... အမည်ဖော်ရခက်တဲ့ ဝေဒနာတွေ ထင်တာထက် လေးလံလာလို့ ဒီတစ်...
B-E-H-S (1) Myeik - Blog
ကဗျာ (3) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (2) တိုင်ကြားစာ (3) ဓာတ်ပုံ (12) ဓာတ်ပုံများ (4) ပင်လယ် ဗဟုသုတများ (2) ပုလဲအကြောင်း (4) ဘာသာရေး (8) မှတ်တမ်းများ (2) သ (1) သတင်း (1036) သတးင် (1) ဟာသ/ကာတွန်း (2) ဆောင်းပါး (57) ပေးစာ (37) ကြေညာ (12)
မြိတ်မြို့တွင် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းကို
မြိတ်ပုလဲမြေ. Powered by Blogger.
လအလိုက် ရေးသားခဲ့သည်များ October (1) September (18) August (5) July (30) June (26) May (31) April (36) March (23) February (8) January (10) December (11) November (8) October (15) September (13) August (14) July (15) June (23) May (35) April (31) March (40) February (17) January (33) December (42) November (38) October (43) September (65) August (83) July (81) June (45) May (47) April (44) March (49) February (25) January (26) December (26) November (57) October (21) September (10) May (4) March (23) February (8) January (13) December (1) May (1) March (1) September (1) August (1) June (1) March (1) February (1) January (17) December (9) November (1) October (1) August (2) July (1) June (3) May (1)
ပင်လယ် ဗဟုသုတများ (2)
မြိတ်မြို့ သစ်ယာဝ ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး တာဝန်ခံမှ ...
မြိတ်မြို့ မဟာသိဒ္ဓိအောင် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွင် ဓမ္မ...
မြိတ်မြို့၌ ဇိဝိတဒါန သံဃာတော်နှင့် သီလရှင်များ ကုသ...
ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် လေပြင်းတိုက်၍ နေအိမ်ပျက်စီးဆံ...
မြိတ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၀ဏ္ဏကျော...
မြိတ်မြို့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသံ...
ကျွန်းစုမြို့နယ် အတွင်း လေပြင်းတိုက် ဒီရေလှိုင်း ရု...
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် တနင်္သာ...
မြိတ်မြို့တွင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား (၆)ထောင်ခန့်န...
မြိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်က ကေအန်ယူလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကို ...
လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်း ပြိုလဲ
မြိတ်တွင် အိမ်ယာစီမံကိန်း ကုမ္ပဏီက ဝန်းခတ် ထားသည်ကိ...
စက်မှုဇုန်နှင့် ဆိပ်ကမ်း ပါဝင်မည့် မြိတ်စီးပွားရေးဇ...
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် ကေအင်န်ယူ ရဲတပ်...
တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် KNLA တိုက်ပွဲဖြစ...
NLD ဗဟိုနာယက ဦးတင်ဦး မြိတ်မြို့ ပညာရေး ကွန်ယက် မ...
ကျွန်းစုမြို့နယ် ပင်လယ်ပြင်အတွင်း လှိုင်းရိုက်ခတ်မ...
ရေးစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးအတွက် ဘုရားကိုင်ချောင်းအား ...
ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်း လူငယ်သင်တန်းသားများ လေ့လာ...
ရေလမ်းကြောင်း ခရီးသွားပြည်သူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေ...
ရေလုပ်သားတွေ အားမကျကြဖို့ သတိပြုသင့်
BEST COMPUTER CENTRE
ပုလဲမြေအကြိုက် Blog များ
Copyright © မြိတ်ပုလဲမြေ | Powered by Blogger